राउतको विखण्डनको मुद्धा औपचारिक रुपमा विसर्जन - Jhilko
नेपालको राजनीतिमा डा. सीके राउतको प्रवेश जति नै आश्चर्य लाग्दो थियो, यसको पटाक्षेप पनि आश्चर्य ढंगले भयो । तराई विखण्डनको मुद्धा लिएर राजनीतिमा हठात प्रवेश गरेका सीकेले पार्टीको वैठकबाट औपचारिक तवरले विसर्जन गरे ।
त्यत्रो भीषण जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा सीकेको उपस्थिति कहीं कतै थिएन । पहिलो संविधानसभाको हठात् विघटनपछि उनको राजनीतिमा प्रवेश भएको थियो । स्वतन्त्र मधेश समूह बनाएर मधेशलाई अलग गर्ने नारा लिएर उनी राजनीतिमा होमिए । उनले निर्वाचनमा भाग लिएनन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलसँग फागुन २४ गते ११ बुँदे सम्झौता गरेपछि उनी एकाएक चर्चामा आए । यसले मधेसको राजनीतिमा तीब्र बहस छेडियो ।
तराई÷मधेसका राजनीतिका मसिहा ठान्ने राजपा र संघीय समाजवादी फोरमका नेताले उनलाई मधेसमा वैधानिकता दिएका थिएनन् । उनलाई उपेक्षा गरिरहेका थिए । तर, केपी ओली सरकारले दिएको भाउबाट उनीहरु यतिबेला धेरै नै तर्सिएका छन् । डराएका छन् ।
डा. सी के राउतले पश्चिमा राजनीतिलाई मधेसमा फैलाएर चीनलाई घेर्ने र भारतलाई हेर्ने रणनीतिलाई सहयोगी भूमिका खेलिरहेको धेरैले बताउने गरेका थिए । नेपाललाई कमजोर पार्ने रणनीति त केन्द्रमा छदैं थियो ।
स्वतन्त्र मधेसको मुद्धाको औपचारिक विसर्जनले उनको अबको गन्तव्य के हुन्छ ? उनी पनि अरु पार्टी जस्तै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर जनमत मार्फत आफ्नो मुद्धा उठाउन तयार भएका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपालको विखण्डनको मुद्धालाई पार्टीको औपचारिक फोरममार्फत् सेलाएका छन् । उनको अरु मधेस, तराईका पार्टीको भन्दा अबको बाटो के मानेमा भिन्न हुन्छ र उनको मौलिकता कसरी अभिव्यक्त होला ? अहिले नै भन्न हतारो हुन्छ ।
क्रिमिया विलय पाँचौ बर्षगाँठमा पुटिनको भ्रमण
पाइल्सबाट मुक्त हुन यसो गरौं
सरकारले चाडबाडको समयमा उपभोक्ताको मागलाई हेरेर चिनीको अभाव हुन नदिन सरकारी कम्पनीमार्फत...
बिपीका चिकित्सकको कमिसन मोहः बिरामीलाई प्रतिबन्धित फुड...
उक्त प्रेस्क्रिप्सन अनुसार सातवटा औषधि र फुड सप्लिमेन्ट सेवन गर्न डाक्टरले सुझाएका...